Yacht iraka any Norvezy - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
"Ny rivotra hery"antso izany vanin-taona mafana mba hanatevin-daharana ny yachting iraka any NorvezyIsika dia mankafy ny maha-avy amin'ny sambo sy ny avy any an-toerana dia hanao roa ampy amin'ny zavatra vato Prekestolen sy Kjeragbolten. Indro ny riandrano sy cozy zavatra tanàna, hisamborana trondro ho an'ny sakafo atoandro sy handeha ho an'ny amin'ny nosy ny Vikings."Ny rivotra hery"antso izany vanin-taona mafana mba hanatevin-daharana ny yachting iraka any Norvezy.
Isika dia mankafy ny maha-avy amin'ny sambo sy ny avy any an-toerana dia hanao roa ampy amin'ny zavatra vato Prekestolen sy Kjeragbolten.
Indro ny riandrano sy cozy zavatra tanàna, hisamborana trondro ho an'ny sakafo atoandro sy handeha ho an'ny amin'ny nosy ny Vikings. Norvezy dia voatokana Avaratra hatsaran-tarehy, harambato sy ny moss rakotra tafo, low rahona sy haingana ny fiovan'ny toetr'andro.
Izahay, dia niondrana an-tsambo ny alalan ny fjords sy ny tany tao amoron-dranomasina: mandeha an-tongotra mamaky ny ala mba hanangona ahy ka mba mifoka rivotra madio.
Vanin-taona mafana any Norvezy dia ny avo, vanim-potoanan'ny fizahan-tany, fa ny sambo dia azo soa aman-tsara circumvented. Ny yacht mamela ny drafitra a nankany mba hisorohana ny vahoaka tamin ny tena mahasarika. Isika dia mandeha ny fotoana mahafinaritra indrindra ny Norvezy, izay mafy hanatratra ny tenanao sy ny lehibe, mba hamonjy ny fotoana sy ny loharano ao amin'ny travel. Ny tanàna taloha-dalambe sy ny nentim-paharazana trano hazo mifangaro amin'ny fomba mirindra ny maritrano maoderina sy ny kolontsaina. Amin'ity andro ity dia isika dia mandeha mitsangatsangana ny Preikestolen, fantatra amin'ny anarana hoe ny"Filazan-tsara"dia ny harambato noho ny haavon'ny enim-polo tongony, iray amin'ireo malaza indrindra vato ao Norvezy. Harambato ambony fisaka ambonin'ny faritra tokony ho dimy amby roapolo metatra tora-droa. metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina.
Misy Kjeragbolten round rock niraikitra eo amin'ny roa mitsangana vatolampy rindrina amin'ny haavon'ny metatra ambonin'ny Lysefjord.
Amin'ny Tandrefana ny soso-kevitra ny nosy dia iray amin'ireo malaza indrindra tamin'ny moyen âge trano ny Norvezy, ny Abbey Utstein. Ao amin'ny taona ny fanorenana ny trano ny mpanjaka, sy ny nandritra ny taonjato maro taty aoriana dia nafindra tany amin'ny Fiangonana. Ny nosy dia afaka mahita tsara ny tilikambo fanilon-tsambo sy ny pillbox nandritra ny ady lehibe Faharoa. Rehetra any ao − km, izay dia mety ho mora foana nanarona an-tongotra na tamin'ny alalan'ny bisikileta. Tanàna andro ao ny diantsika. Eto dia afaka fandehandehanana amin'ny cozy-dalambe, mankafy mafy kafe sy waffles sy hahita ny fomba dia ho velona ankehitriny Norwegians. Azo atao (arakaraka ny toetr'andro) isika, dia ho nitoetra tao amin'ny nosy Buccoo ary mitsidika ny Viking tranom-Bakoka. Izany no tanteraka reconstructed toeram-pambolena tanàna ny Vikings. Isika dia hijery Norvezy amin'ny yacht, ary efa-polo amby enin. Ny sambo dia ilaina rehetra ho an'ny aina velona: cabins amin'ny aina fandriana sy wardrobes, efitra fandroana amin'ny ranonorana sy ny rano mafana, malalaka saloon amin'ny lakozia. Rehefa fandoavam-bola dia mandefa ny toromarika tsipiriany ny toerana mba tonga, izay miantso eo amin'ny toerany, inona no mba hitondra sy amin'ny ankapobeny dia ny zavatra mba hiomanana. Efa nandinika tsara ny hevitra tsirairay ny lalana, nefa, arakaraka ny toetr'andro na manan-danja hafa toe-javatra hitehirizany ny zo hanao fanitsiana ny lalana sy ny fandaharana. Nandritra ny taona maro aho dia manana fanontaniana, raha ny fisafidianana ny lalana manaraka ny diany. Izany foana no mitondra ahy ho amin'ny Avaratra. Noho izany antony izany eo amin'ny fiainako roa taona lasa izay niseho tao sy ny an-tsambo. andro tany groenlandy nangalatra ny foko amby roa-polo fito ambin'ny folo amby roa-polo valo ambin'ny folo ka fantatro tsara izay halehako. Ao Lofoten dia mamirapiratra efatra amby roa-polo, dia tsy natory nandritra ny andro, ka tamin'ny faran'ny herinandro toa any amin'ny tendrontany arktika mifarana ny taona. Miantsona ao: dimy amby efa-polo, ary ny olona dia anontanio hoe:"Eny ary, angamba indray mandeha ny manara-maso ny fahazavana?"Ny ekipa no toy izany fa ireo olana tsy toa hafahafa, ary hametraka azy ao amin ny afo sy ny rano, ao amin'ny varahina sodina koa, fa isika no tsy naka fanahy.
Ho fisaorana indray ny Avaratra, tsy misy kisendrasendra ny olona.
Izany no traikefa nahafinaritra, araka izay nofy ny ranomasina Avaratra, ary te-hanantona ny mombamomba ny mpanoratra Nansen ambonin ny Latabatra.
Aingam-panahy amin'ny endrika madio indrindra sy ny zava-mahagaga, izay afaka manolo-tanana.
Ny Tongotra lavitra lalana maharitra nandritra ny ora dimy
Sary, nihobim-pifaliana, ary indraindray saika nitomany, ny zavatra toy izany hatramin'izay. Eo amin'ny diany Avaratra aho manonofy ny ho tena ela, nijery sary mampivarahontsana ny endriky sy ny sary an-tsaina ahoana no tsy tonga ary dia very eo amin'ny mizana ny natiora. Ary ny Avaratra eo amin'ny sambo dia zavatra tena lavitra sy tsy azo tanterahina. Rehefa nofiko tampoka ny zava-marina, dia nitondra ny fotoana mba ho tony. Teo no ho eo aho dia nahatsapa ny sasany kely fihetseham-po, aoka tsy ny tsiky dia handao ny tavany, ny tsy manam-petra ny saina sy ny fihetseham-po aho izay tiako sy izay rehetra ilaiko. Nitsangantsangana ny alalan ny arabe ao Stavanger, nahatsapa ho toy ny mahery fo ny Wizarding izao tontolo izao Tomm Moore sy ny tsy mino ny zava-misy, ny alina mijery sy ranomasina-ny aretina. Afaka manazava ny fitiavana ny Avaratra amin'ny teny.
Misy nandritra ny fotoana ela tany amin'ny toerana lalina ao anatiny sy mifandray amin'ny maro akaiky ny fo ny zavatra, raha tsy izay dia tsy azo sary an-tsaina ny Avaratra: unearthly ny endriky avy izay misy ny fitoniana, mafana ba zavatra amin'ny raitra lamina sy ny Kapoaka ny dite mafana, izay tsy mba tsara toy ny rehefa niverina avy tany amin'ny hatsiaka.
Eny izahay, ary mafy tonga soa izany.
Dia ho matihanina kapiteny izay dia mampianatra ny fototry ny sambo, ary ianao dia ho afaka ny handray anjara mavitrika amin'ny fitantanana ny sambo mba niondrana an-tsambo sy ny fitantanana, mamory sy hanampy nandritra ny mooring.
Isika dia miaina ao anaty sambo.
Ny yacht manana aina double cabins amin'ny roa am-pandriana (zara raha roa ny fandriana ao amin'ny fandriako ambony fandriana).
Koa samy manana trano fialan-tsasatra kely fitafiana ho mitahiry ny akanjo sy mikatona niches ho kitapo sy ny kely valizy. Matetika isika no tsy hitondra eo amin'ny Solaitrabe ny Coca mandritra ny diany, toy izany dia mampitombo be ny vidin'ny sy ny tsy mila. Ny andro voalohany ataontsika Ankapobeny purchase list, mialoha nanaiky mpandray anjara rehetra. Zaraina adidy (matetika hahazo ny max fotoana isan-kerinandro) ary manomana tsotra sakafo Maraina sy ny sakafo atoandro tao anaty sambo ary matetika manana sakafo hariva ao amin'ny trano fisakafoanana nandritra mijanona. Nandritra fitsangatsanganana isika miezaka mba hanana mandanjalanja ny ranomasina sy ny tany. Ny eo ho eo ny famindrana isan-andro dia roa-polo maily, izay avy amin'ny ora yachting ny andro. Amin'ny Parking dia tonga taorian'ny sakafo atoandro, ary isika dia manana fotoana bebe kokoa mba hijery ny toerana ny hatsaran'ny.
Araka ny antontan'isa, ny olona dia mora mihetsika ny aretina.
Fa isika kosa handeha anao amin'ny tsotra ny faritra sy ny tsy handeha ho any an-dranomasina nandritra ny tafio-drivotra.
Mora niasa ny ankamaroan'ny olona dia manaiky ny ara-dalàna sy ny fandraisana ny fanafody ho an'ny aretina motion hanala tanteraka ny mahazo aina.
Indrindra fa amin'ny andro iray ny tena adapts,"prokachivaya"ary ny takelaka dia tsy nila mihitsy.
Alohan'ny handeha isika, dia mandamina ny fivoriana-fivoriana izay dia mampahafantatra ny mpandray anjara tsirairay, ary ny kapiteny, mamaly fanontaniana, hiresaka momba ny fandaharana, ary ny tsipiriany rehetra. Raha toa ka tsy mahazo ny ho avy, aza manahy. Isika hamorona ny chat ny ekipa, izay ianao dia ho afaka ny hihaona aminao amin'ny fitsarana tsy natrehiny. Dia nihaona tao amin'ny toerana misy ny Marina.
Kad yra iš prancūzijos į moteris. Atsisveikinti su Prancūzija
ombiasy tao Chatroulette Chatroulette fanompoana Mampiaraka amin'ny chat roulette an-tserasera avy amin'ny finday maimaim-poana Ny fiarahana amin'ny chat download amin'ny chat roulette chatroulette maimaim-poana ny olon-dehibe Mampiaraka dokam-barotra trandrahana amin'ny chat roulette zazavavy maimaim-poana tsy mila fisoratana anarana ny firaisana ara-nofo lahatsary mahafinaritra maimaim-poana